မိုးသည်းထန်စွာ ရွာပြီးနောက် ရွာထဲမှာ မြေကြီးတွေ အက်ကွဲလာလို့ ရွာသူရွာသားတွေ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြ - CeleLove
မ​ကွေးတိုင်း​ဒေသကြီး ပွင့်​ဖြူမြို့နယ်​​ရွှေ​လှေ​ကျေးရွာအုပ်​စုမှရိုးကုန်း​ကျေးရွာတွင်​ 2.6.2019 ​နေ့က ည​နေ ၅ နာရီအချိန်​မှည ၉ နာရီအထိ မိုးသည်းထန်​စွာ ရွာသွန်းခဲ့ ပါ တယ် …။
မိုးရွာပြီး​နောက်​ပိုင်းမှာ​တော့ အိမ်​​ခြေ ၂၀ နီးပါးရဲ့အိမ်​ဝိုင်း​တွေမှာဖေါ်ပြပါပုံပါအတိုင်းဘဲ ​မြေကြီးများကွဲအက်​ပြီး အက်​​ကြောင်းများဖြစ်​​ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်​…။
ထိုအက်​​ကြောင်းများရဲ့အကျယ်​က​တော့ ၁​ပေ မှ၁​ပေခွဲ နီးပါး​လောက်​ရှိပြီး အနက်​က​တော့ ၁၅​ပေ နီးပါး (ဝါးတစ်​လုံးထိုးကြည့်​ရာတွင်​​ အောက်​သို့မ​ရောက်​)​လောက်​ အနက်​ဖြစ်​ပါတယ်​လို့ သိရှိ ရ ပါ တယ် …။
ထို​ကျေးရွာရှိမိသားစုများမှာစိုးရိမ်​ပူပန်ပြီး​ကြောက်​ရွံ့​နေကြပါတယ်​…အဲဒီအက်​ကွဲ​ကြောင်းများဟာဘယ်​လို​ကြောင့်​ဖြစ်​​ပေါ်လာတယ်​ဆိုတာရယ်​ ​နေထိုင်​မှုအတွက်​အန္တရာယ်​ရှိမရှိဆိုတာကိုသိရှိ​စေဖို့အတွက်​ အားလုံးဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားကူညီ​ပေး​စေလိုပါတယ်​ခင်​ဗျား ….
အဲဒီသတင်းကို​တော့ ​ရွှေ​လှေ​ကျေးရွာအုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးနဲ့မှရိုးကုန်း​ကျေးရွာ ရာအိမ်​မှူးတို့ဆီမှ ပထမသိရှိရပြီး ယခုပို့စ်​ပိုင်​ရှင်​လည်းကိုယ်​တိုင်​သွား​ရောက်​မျက်​မြင်​ကြည့်​ရှု့  ခဲ့  ပါ တယ် …။
​ကျေးရွာသူ​ကျေးရွာသားများအာလုံး​ဘေးကင်းစွာ အန္တရာယ်​ကင်းစွာ နေထိုင်​နိုင်​ကြပါ​စေလို့ဆု​တောင်း​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ခင်​ဗျား ………
Unicode ဖြင့် ဖတ်ရန်
မိုးသညျးထနျစှာ ရှာပွီးနောကျ ရှာထဲမှာ မွကွေီးတှေ အကျကှဲလာလို့ ရှာသူရှာသားတှေ ထိတျလနျ့ကွောကျရှံ့နကွေ
မ​ကှေးတိုငျး​ဒသေကွီး ပှငျ့​ဖွူမွို့နယျ​​ရှေ​လှေ​ကြေးရှာအုပျ​စုမှရိုးကုနျး​ကြေးရှာတှငျ​ 2.6.2019 ​နကေ့ ည​နေ ၅ နာရီအခြိနျ​မှည ၉ နာရီအထိ မိုးသညျးထနျ​စှာ ရှာသှနျးခဲ့ ပါ တယျ …။
မိုးရှာပွီး​နောကျ​ပိုငျးမှာ​တော့ အိမျ​​ခွေ ၂၀ နီးပါးရဲ့အိမျ​ဝိုငျး​တှမှောဖျေါပွပါပုံပါအတိုငျးဘဲ ​မွကွေီးမြားကှဲအကျ​ပွီး အကျ​​ကွောငျးမြားဖွဈ​​ပျေါလာခဲ့ပါတယျ​…။
ထိုအကျ​​ကွောငျးမြားရဲ့အကယျြ​က​တော့ ၁​ပေ မှ၁​ပခှေဲ နီးပါး​လောကျ​ရှိပွီး အနကျ​က​တော့ ၁၅​ပေ နီးပါး (ဝါးတဈ​လုံးထိုးကွညျ့​ရာတှငျ​​ အောကျ​သို့မ​ရောကျ​)​လောကျ​ အနကျ​ဖွဈ​ပါတယျ​လို့ သိရှိ ရ ပါ တယျ …။
ထို​ကြေးရှာရှိမိသားစုမြားမှာစိုးရိမျ​ပူပနျပွီး​ကွောကျ​ရှံ့​နကွေပါတယျ​…အဲဒီအကျ​ကှဲ​ကွောငျးမြားဟာဘယျ​လို​ကွောငျ့​ဖွဈ​​ပျေါလာတယျ​ဆိုတာရယျ​ ​နထေိုငျ​မှုအတှကျ​အန်တရာယျ​ရှိမရှိဆိုတာကိုသိရှိ​စဖေို့အတှကျ​ အားလုံးဝိုငျးဝနျးစဉျးစားကူညီ​ပေး​စလေိုပါတယျ​ခငျ​ဗြား ….
အဲဒီသတငျးကို​တော့ ​ရှေ​လှေ​ကြေးရှာအုပျ​ခြုပျ​​ရေးမှူးနဲ့မှရိုးကုနျး​ကြေးရှာ ရာအိမျ​မှူးတို့ဆီမှ ပထမသိရှိရပွီး ယခုပို့ဈ​ပိုငျ​ရှငျ​လညျးကိုယျ​တိုငျ​သှား​ရောကျ​မကျြ​မွငျ​ကွညျ့​ရှု့ခဲ့ပါ တယျ …။
​ကြေးရှာသူ​ကြေးရှာသားမြားအာလုံး​ဘေးကငျးစှာ အန်တရာယျ​ကငျးစှာ နထေိုငျ​နိုငျ​ကွပါ​စလေို့ဆု​တောငျး​ပေးလိုကျ​ပါတယျ​ခငျ​ဗြား ………